३० वर्ष लामो संघर्षपछि उम्मेदवार बनेका जनयुद्वका घाइते ‘अपार’ ! - Everest Dainik - News from Nepal
३० वर्ष लामो संघर्षपछि उम्मेदवार बनेका जनयुद्वका घाइते ‘अपार’ !
तुलसीपुर, कात्तिक १९ । तीन दशकदेखि राजनीतिक यात्रामा रहेका जगप्रशाद शर्मा ‘अपार’ अहिले दाङ क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ बाट प्रदेशको उम्मेदवार बनेका छन् । राजनीतिमा स्वच्छ छबि बनाएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १२ क्याम्पस रोड निबासी अपार बाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
सादा जीवन, उच्च बिचार, सरल, कुसल संगठक ,राजनीतिक नेतृत्वका बिश्वास पात्र रहेका अपार बिगत तीन दशक देखी पार्टीको राजनीतिमा क्रियाशिल हुँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका अपार बिद्यार्थी कालदेखी नै भुमिगत हुनु पर्ने बाध्यता रह्यो । जसले गर्दा उनी उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नबाट बञ्चित भए । २०४३ देखी बिद्यार्थी राजनीति शुरु गरेका अपार सानै उमेरमा भुमिगत भए ।
याे पनि पढ्नुस दाङमा शक्तिशाली विष्फोट, म्यादी प्रहरीसहित आठ घाइते
२०४६ सालमा उनले जनआनदोलनमा सक्रिय सहभागी भए । २०४७ सालमा पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका उनले २०४९ देखी ०५१ सम्म ग्रामिण बर्ग संघर्षको नेतृत्व गरे । २०५२ साल फागुण १ गते देखी शुरु भएको जनयुद्धको पहलकर्ताका रुपमा उनी थिए । २०५३ सालमा पार्टीको रुकुम जिल्ला कमिटि सदस्य भएका उनी सोही बर्ष देशकै पहिलो एम्बुसको नेतृत्व गरे । युद्धकै क्रममा २०५५ सालमा उनी घाईते भए ।
उनलाई आँखामा छर्रा गोली लाग्यो । आँखाको उपचारकै क्रममा थिए, तर उनले हिम्मत हारेनन्, उनी घाईते हुँदा पनि नियमित लडि रहे । सोही बर्ष उनले पार्टीको क्षेत्रीय व्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाले । उनी २०५७ सालमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्बाचित भएका थिए । उनी पार्टी भित्रै निकै त्याग, तपस्या गरेका नेताको रुपमा चिनिन्छन् । आन्दोलनकै क्रममा उनले देशका बिभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आए । पार्टीकै नेतृत्वका लागि उनलाई कहिले पुर्ब त , कहिले पश्चिम खटाईयो । उनले ईमन्दारीपुर्बक जिम्मेवारी सम्हाले ।
उनी २०४६ देखी ०५५ सम्म रुकुममा, २०५६ देखी ५८ सम्म प्रबासमा, २०५९ देखी ६६ सम्म पुर्बी नेपालमा नेतृत्वका लागि खटाईएको थियो । पार्टीको बिभिन्न आन्दोलनको नृेतृत्व गर्दै आएका उनले निकै दुःख, कष्ठ पनि झेल्नु प¥यो । उनी २०५१ सालमा डोल्पा हिरासतमा ८ दिन र २०५५ सालमा लखनउमा तीन दिन जेलमा बस्नु प¥यो ।
याे पनि पढ्नुस बस भित्रै जलेर एक जनाको मृत्यु
पार्टीको हरेक तह र तप्कामा संघर्ष गर्दै आएका उनी अहिले समाजबाद आधार तयार गर्न चुनाबी लडाईमा छन् । उनले समाजबादको आधार तयार पार्ने, ७० बर्ष देखीको अस्थाई सरकारलाई अन्त्य गरी स्थायी सरकार निर्माण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तथा दाङलाई प्रादेशीक राजधानी बनाउने मुख्य एजेण्डा अघि सारेका छन् ।